Wararka - YIWU, Shiinaha, Maajo 12, 2020 / PRNewswire / - Bishii Meey 10, 2020, waxaa si toos ah loo bilaabay munaasabadda khadka tooska ah ee sannadka 2020 ee Shiinaha.
YIWU, Shiinaha, Maajo 12, 2020 / PRNewswire / - Bishii Meey 10, 2020, waxaa la bilaabay munaasabadda khadka tooska ah ee 2020 ee Shirkadda Shiinaha.
YIWU, Shiinaha, Maajo 12, 2020 / PRNewswire / - Bishii Meey 10, 2020, waxaa la bilaabay munaasabadda khadka tooska ah ee 2020 ee Shirkadda Shiinaha. Iyada oo ah dhacdo sumadeed sanadle ah oo muhiim ah oo ku taal suuqa Yiwu, Tartankii Iibiyaasha Top 10 ee Iibiyeyaasha ayaa sidoo kale si rasmi ah u bilaabay howsha codeynta
Tartankan oo si habsami leh loo qabtay sanadkii sideedaad oo xiriir ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay noocyo ganacsi oo ajnabi ah oo saameyn ku leh ganacsiga, sida Hailing GEMEI Shirkad Yar oo Guryaha Yaryar, Nicole Fashion Jewelry, Zongxin Canvas Shoes, iyo BAOLA, iwm. iibiyeyaashu waxay yagleelaan wacyigelin calaamadeysan oo ay muujiyaan awooda ay leeyihiin, Yiwugo wuxuu wax ka bedel ku sameeyay barnaamijka abaalmarinta. Inta lagu guda jiro xulashada "Top 10 Iibiyeyaasha", tartanka waxaa sidoo kale kasoo muuqan doona 10 "Ganacsadayaal Hormuud ah", 80 "Iibiyeyaal Model" iyo 120 "Ganacsato caan ah" Waxaa xusid mudan in, markii ay soo ifbaxday "Live Streaming Era for All", abaalmarin "Top 10 Influencers" lagu daray barnaamijka abaalmarinta ee tartanka sanadkan, iyada oo ujeedadu tahay in loo oggolaado iibiyeyaashu inay soo bandhigaan sawirradooda shirkadaha iyo sumadaha iyada oo loo marayo qulqulka tooska ah, sidaas darteed soo jiidashada dareenka iibsadayaasha adduunka oo dhan si aad u muuqata. Nidaamka codbixinta wuxuu bilaaban doonaa 10-ka Maajo, 2020 wuxuuna soconayaa illaa 31-ka Diseembar, 2020. Natiijooyinka waxaa lagu dhawaaqi doonaa wixii ka dambeeya Janaayo 1, 2021.